I-Turks kunye neCaicos Islands zihlaziya i-TCI Iimfuno eziQinisekisiweyo zokuHamba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zeTurks kunye neCaicos » I-Turks kunye neCaicos Islands zihlaziya i-TCI Iimfuno eziQinisekisiweyo zokuHamba
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zeTurks kunye neCaicos • Iindaba ezahlukeneyo
Abahambi baya kucelwa ukuba bathathe i-COVID-19 RT-PCR, i-NAA, i-RNA okanye uvavanyo lwe-Antigen kwiintsuku ezintathu zokuhamba.
Umhla wokuqokelelwa kwesampulu kufuneka ube ngaphakathi kweentsuku ezintathu (iiyure ezingama-72) zomhla wokuhamba.
Uvavanyo kufuneka lwenziwe elebhu yonyango kunye nezi zinto zilandelayo: ukuvunywa yiKholeji yeAmerican Pathologists (CAP); ibhaliswe yiZilungiso zoPhuculo lweLebhu yeLabhoratri (CLIA); Isiqinisekiso se-ISO 15189.
Uvavanyo lwe-antibody kunye neziphumo ezivela kwiikiti ezivavanywa ekhaya azisayi kwamkelwa.
The Turks and Caicos Islands ibhengeza uhlaziyo kwiimfuno zohambo oluya kwindawo njengenxalenye ye-TCI eqinisekisiweyo, inkqubo yokuqinisekisa kwangaphambili yokuhamba kunye ne-portal, eya kuthi inyanzelise ukuba bonke abahambi babonise iziphumo ezingalunganga ze-COVID-19 RT-PCR, NAA, RNA okanye Antigen uvavanyo oluthathwe kwiintsuku ezintathu zokuhamba, ukuqala ngoJulayi 28, 2021.
Umhla wokuqokelelwa kwesampulu kufuneka ube ngaphakathi kweentsuku ezintathu (iiyure ezingama-72) zomhla wokuhamba, owancitshiswayo ukusuka kwimfuno yangaphambili yovavanyo olwaluza kuthathwa kwiintsuku ezintlanu zokufika, kunye neKhalityhula yoMhla woVavanyo kwi-portal eqinisekisiweyo ye-TCI ukunceda abahambi ekuchongeni ukuba bathathe nini uvavanyo.
Izilungiso ezivunyiweyo kwiMigaqo yokuCoca abagibeli yezeMpilo nayo eqala ukusebenza nge-28 kaJulayi ibandakanya ukwamkelwa kweTest Transcription Polymerase Chain Reaction Tests (RT-PCR); Uvavanyo lwe-Nucleic Acid Amplification (NAA); RNA okanye iimvavanyo zeemolekyuli; kunye novavanyo lwe-Antigen lokungena kwiiTurks kunye neCaicos Islands.
Uvavanyo kufuneka lwenziwe elebhu yonyango kunye nezi zinto zilandelayo: ezivunyiweyo yiKholeji yeAmerican Pathologists (CAP); ibhaliswe yiZilungiso zoPhuculo lweLebhu yeLabhoratri (CLIA); Isiqinisekiso se-ISO 15189. Ngaphambili, indawo ekuyiwa kuyo yayikukuvuma kuphela iimvavanyo ze-RT-PCR. Uvavanyo lwe-antibody kunye neziphumo ezivela kwiikiti ezivavanywa ekhaya azisayi kwamkelwa.
"Siyazingca ngokwamkela ngokukhuselekileyo abahambi kwiiTurks zethu ezintle kunye neCaicos Islands kunyaka ophelileyo kwaye sihlaziya iimfuno zohambo ukuqinisekisa ukubekwa esweni okuqhubekayo kunye nokuqwalaselwa kokusebenza kunye nokutshintsha kweemvavanyo ezikhoyo ze-COVID-19," utshilo oHloniphekileyo uJosephine Connolly, Umphathiswa Wezokhenketho kwiiTurks kunye neCaicos Islands. “Bangaphezu kwama-60 eepesenti abantu abadala abakwiiTurks naseCaicos Islands abagonywe ngokupheleleyo, nto leyo esenza ukuba sibe lelinye lawona mazwe angafumananga konke ukhuseleko emhlabeni; sidibene nenkqubo yethu eqinisekisiweyo ye-TCI, siqinisekile ngentlalo-ntle yoluntu ngokubanzi kunye neendwendwe njengoko uhambo oluya kwindawo esiya kuyo luqhubeka lukhula. ”
Njengenxalenye ye-TCI eQinisekisiweyo, ebisoloko ikwindawo yabahambi ukusukela nge-22 kaJulayi ka-2020, xa indawo ekuyiwa kuyo ivula imida yayo kubakhenkethi, abahambi kufuneka babe neinshurensi yezonyango / yokuhamba egubungela i-medevac (iinkampani zeinshurensi ezibonelela ngeinshurensi efunekayo ziya kubakho kwi-portal), iphepha lemibuzo lokuvavanywa kwezempilo, kunye nokuqinisekiswa ukuba bafundile kwaye bavumile kuxwebhu lomgaqo-nkqubo wabucala. Ezi mfuno mazizaliswe kwaye zilayishwe kwi-portal eqinisekisiweyo ye-TCI, efumaneka kwifayile ye- Iwebhusayithi yeBhodi yeTurk kunye neCaicos Islands yeBhodi yabakhenkethi ngaphambi kokufika kwabo.
Iziqithi zeTurks kunye neCaicos zihleli ziphaphile kwaye zingaguquguquki ngokubhekisele kwiimfuno zabahambi zamanye amazwe, ezifanayo kubahambi abagonyiweyo nabangagonyelwanga. Ngenxa yoku, indawo ekuyiwa kuyo ifumene iNqanaba lokuLumkisa 1 kuMaziko oLawulo lweZifo (CDC). Oku kubonisa isiganeko esibalulekileyo kwiphulo lokugonya iTurks kunye neCaicos Islands, eliqale ngoJanuwari 2021 kwaye libangele ngaphezulu kwama-60 epesenti yabantu abadala abagonywe ngokupheleleyo iyeza lokugonya le-Pfizer-BioNTech-ukuyenza ibe lelinye lawona mazwe angagonywanga emhlabeni.